एउटाको मुद्दामा अर्कैलाई पक्राउ गरेपछि.....
२०७३ माघ ९ आइतबार, खोटाङ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले लागुऔषध (गाँजा) मुद्दामा एउटा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्नेमा अर्कैलाई पक्राउ गरी कारबाही गरेको थाहा पाएपछि अदालतले तत्काल छाड्न निर्देशन दिएको छ । गत पुस २४ गते पक्राउ परी कारबाही भोगिरहेका डिकुवा–६ का नरबहादुर मगरलाई शनिबार जिल्ला अदालत, खोटाङले तत्काल छाड्न पत्रमार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो । डिकुवा–२ का नरबहादुर मगरलाई पक्राउ गर्नुपर्नेमा प्रहरीले सोही नामथर भएका डिकुवा–६ का नरबहादु ... बाँकी अंश»
सधै सुन्दर र जवान देखिन किन जाने ब्यूटी पार्लर ? घरमै अपनाउनुहोस् ५ उपाय
२०७३ माघ ८ शनिबार, काठमाडौं । तपाईै आफू आफैंमा सुन्दर देखिन त पक्कै पनि चाहनुहुन्छ होला । तपाईँलाई आफ्नो सुन्दरताको विषयमा लाग्ने गरेको चिन्ताको कारणले तपाईँको दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत असर पुगेको अनुभव पनि गरिरहनु भएको होला । यस्तो अवस्थामा तपाईँ अब ब्यूटी पार्लर धाएर आफूलाई सुन्दर देखाउने भन्दा पनि घरमै केही विषयमा दैनिक केही विषयमा ध्यान दिनु भयो भने तपाईँ सधैं सुन्दर र जवान देखिनुहुन्छ । तपाई सुन्दर देखिनको लागि तपाईले आफ्नो छाला तथा शरीरलाई ध्यान दि ... बाँकी अंश»
राससकी पहिलो महिला महाप्रबन्धक निर्मला आचार्य सेवा निवृत्त
२०७३ माघ ७ शुक्रबार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) की महाप्रबन्धक निर्मला आचार्य उमेरहदका कारण शुक्रबारदेखि सेवा निवृत्त भएकी छिन् । समितिको पहिलो महिला महाप्रबन्धकका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी महाप्रबन्धक आचार्यले २३ वर्ष सेवा गरेकी हुन् । रासस सेवाकै क्रममा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ साउन १४ गतेको निर्णयबाट आचार्य विशिष्ठ श्रेणीको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएकी थिइन् । समितिमा विसं २०५० मा अधिकृतस्तर सातौँ तहको सहसम्पादक पदमा ... बाँकी अंश»
सार्क हस्तकला भवन बन्ने, पाँच करोड विनियोजन
२०७३ माघ ६ बिहिबार, काठमाडौँ । उद्योग मन्त्रालयले सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माणका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । नेपाल हस्तकला महासङ्घको सक्रियतामा सार्क हस्तकला निर्माणका लागि मन्त्रालयले उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । नेपाल हस्तकला महासङ्घका उपनिर्देशक ऋषिराम सुवेदीले सार्क देशमा उत्पादन भएका हस्तकलाको सोरुम, प्रयोगशाला सेवा र डिजाइन केन्द्र राख्ने गरी तयारी थालिएको जानकारी दिए । उनले भने, “यो भवन निर्माण हस्तकला विकासका लागि ... बाँकी अंश»
चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा यसरी समेटियो नेपालको 'स्वस्थानी व्रतकथा'
२०७३ माघ ५ बुधबार, काठमाडौं । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले हिन्दूहरुको महत्वपूर्ण पर्व स्वस्थानी व्रतकथालाई महत्वकासाथ उल्लेख गरेको छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरु सिन्ह्वा तथा ग्लोवल टाईम्सले पनि यसलाई महत्वकासाथ प्रकाशित गरेका छन् । ग्लोबल टाईम्सले विभिन्न सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा माधवनारायण महापर्वको विषयमा फोटो फिचर नै हालेको छ । त्यस्तै, सिन्ह्वाले पनि हिन्दूहरुको यस पर्वको बारेमा महत्वका साथ समाचार प्रकाशित गरेको छ । ग्लोबल टाईम्सले दक्षिण एशियाली आफ्नो ... बाँकी अंश»
योजना बन्छन् तर पूरा हुँदैनन्, अब दिगो बनाउने तालिम
२०७३ माघ ५ बुधबार, जाजरकोट । यहाँका १९ वटा योजनाका उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिइएको छ । योजनाको दिगोपन र उपलब्धिमूलक बनाउन उपभोक्तालाई तालिम दिइएको हो । नेपाल सरकार तथा स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतको साना सिँचाइ कार्यक्रमले १९ सिँचाइ कुलो योजनाका १०० उपभोक्तालाई निर्माण गुणस्तर, मर्मत, संरक्षणका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको हो । हचुुवामा विकास योजना निर्माणले दिगो नहुने र बजेट मात्र सकिने परिपाटीलाई न्यूनीकरण गर्न उपभोक्ताल ... बाँकी अंश»
ब्वाईफ्रेण्डले धोका देलान् कि भन्ने त्रास छ ? अपनाउनुस् यी पाँच तरिका
२०७३ माघ ४ मंगलबार, काठमाडौं । अहिलेको समय भनेको धेरै मानिसको चिन्ताको विषय नै आफ्नो प्रेमी तथा प्रेमीकाले धोका दिएका कारण धेरै मानिसहरु चिन्ताको मूल फुटाएर सधैंभरी चिन्ताको सागरमा फसिरहेको पाईन्छ । तर, किन त ? कसरी यस्तो समस्याबाट प्रमीप्रेमीकाले मुक्ति पाउन सक्छन् त ? यो विषय धेरैले खोजी रहेको विषय हो । कुनैपनि प्रेमी तथा प्रेमीकाको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुनु भनेको उसको उनीहरुबीच एकअर्काेलाई बुझ्न नसक्नु र उनीहरुमध्ये एकले अर्काेलाई मन नपर्ने व्यवहार गर ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ ४ मंगलबार, बेनी । प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावका साथै सम्बन्धित पक्षको बेवास्ताका कारण म्याग्दीका भिरपहरामा पाइने आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बहुमूल्य शिलाजित उत्खनन हुनसकेको छैन । शिलाजित उत्खनन गरी उपभोग गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान नपुगेपछि बर्सेनि करोडौंको नोक्सानी भइरहेको छ । म्याग्दीका बाबियाचौर, ज्यामरुककोट, भकिम्ली, कुइनेमङ्गले, मुदी, मुना, ताकम, मराङ, बिमलगायत गाविसका पहरामा शिलाजित पाइन्छ । शिलाजित उ ... बाँकी अंश»
भारतमा हुने वेश्यावृत्तिको सनसनीपूर्ण खुलासा
२०७३ माघ ३ सोमबार, एजेन्सी । यौन व्यवासायलाई हाम्रो समाजमा घृणाको नजरले हेरिन्छ । यौन व्यवासायको लागि हाम्रो समाजमा न कुनै राम्रो स्थान छ न त हेराइ नै । धेरै मानिसहरुलाई यस कुराको जानकारी हुदैन की प्राय यस व्यवासायका महिला आफ्नो इच्छाले आएका हुदैनन् । उनिहरु मानव तस्करीको शिकार बनेर त अरुले फसाएर सो काममा आइपुग्छन् । विश्वमा लगभग ४ करोड 'सेक्स वर्कर' रहेका छन् । यस मध्ये भारतमा करिब ३० लाख रहेका छन् । वेश्यावृत्ति मा पक्राउ पर्ने महिलाको औसतन उमेर १३ बर्ष र ... बाँकी अंश»
सामुदायिक वनका पोखरी पुरिन थालेपछि प्राकृतिक सम्पदा लोपहुँदै
२०७३ माघ ३ सोमबार, बेनी । पहिरो र भूस्खलनका कारण म्याग्दीको वगरफाँट सामुदायिक वन र ठूलो खवरा सामुदायिक वनका एक दर्जन कुवा तथा पोखरी पुरिएका छन् । तोराखेतको पहिरो र भसभसेको भूस्खलनका कारण बगरफाँट सामुदायिक वन र ठूलो सल्लेरी सामुदायिक वनका ताल र पोखरी पुरिएका हुन् । “सधैँ तालमा एकनासको पानी रहने गरेका कारण पशु–चौपाया तथा बटुवाले पानी खान सजिलो हुन्थ्यो”, स्थानीयवासी डेकबहादुर कार्कीले भने, “हाल तालहरू पुरिँदै गएकाले तालको पानी सुक्न थालेको छ ।&rdqu ... बाँकी अंश»
एकाएक पाकिस्तानमा भाईरल भयो नेपालले भारतकाे साथ छाडेकाे कुरा
२०७३ माघ २ आइतबार, काठमाडौं । नेपाल भारतको पञ्जाबाट बाहिर गयो भन्ने हल्ला एकाएक पाकिस्तानीहरुको सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमा यो ट्रेन धेरै भाईरल भएको हो । पाकिस्तानीहरुको यो ट्वीटरमा एकाएक भाईरल भएको यस्ता तस्वीरहरुमा नेपालले १९५ण्मा भारतसँग् भएको शान्ति सीन्धसमेत नेपालले रद्द गर्न माग गरेको बताएका छन् । उनीहरुले नेपाल भारतसँगको सम्बन्ध परिवर्तन गर्न चाहन्छ भन्ने विषयमा धेरै ट्बीट गरेका छन् । यसरी ट्वीटरमा प्रयोग ... बाँकी अंश»
विश्वका सबैभन्दा साना १० मुलुकहरु
२०७३ माघ २ आइतबार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाहरुको सरदर क्षेत्रफल पुगनपुग ८ सय वर्ग किलोमिटरजति होलान् । तर, विश्वमाा यस्ता हुलुकहरु पनि छन् जुन काठमाडौं उपत्यकाभन्दा कयौं गुणा सानो रहेको छ । तरपनि धेरै सुन्दर रहेका छन् । विश्व रहेका कूल मुलुक मध्ये तल उल्लेखित मुलुकहरु ४ सय वर्ग किलोमिटर भन्दा साना मुलुकहरु छन् । उनीहरुको बारेमा हामी तल तस्वीर र त्यसको क्षेत्रफल सहित उल्लेख गरेका छौं । ... बाँकी अंश»
सम्झिइन् पत्रकार उमा सिंहः स्मृतिमा दीप प्रज्ज्वलन
२०७३ पौष २८ बिहिबार, महेन्द्रनगर (धनुषा) । जनकपुरकी प्रथम सहिद महिला पत्रकार उमा सिंहको आठौँ स्मृति दिवस बुधबार मनाइएको छ । उमा सिंहको आठौँ स्मृतिमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषा शाखाले बुधबार साँझ जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा दीप प्रज्वलन गरी मनाएको छ । दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा जनकपुरका धेरै सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो । जनकपुरको रेडियो टुडेमा कार्यरत २५ वर्षीया पत्रकार सिंहलाई विसं २०६५ पुस २७ गते राति सवा ९ बजे जनकपुर नगरपालिका–१४ रजौलस्थित डेर ... बाँकी अंश»
ध्वनि प्रदूषणले छट्पटिँदै वीरगन्जः मानसिक विचलनलगायतको समस्या
२०७३ पौष २६ मंगलबार, वीरगन्ज । बिहे, भोज, भण्डारा, व्रतबन्ध, सभा तथा धार्मिक पर्वलगायतका समयमा ठूलो स्वरमा विभिन्न गीत सङ्गीत बजाउने डिजेजस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने अचेल सामाजिक संस्कार बन्दै गएको छ । बिहान ४ बजे मन्दिर, मस्जिदमा ठूलो स्वरमा धार्मिक प्रार्थना, बसपार्क क्षेत्रमा गाडीको हर्न र नगरभित्रको सडकमा निन्द्रा खराब गर्ने गरी बाजा बजाउनाले नगरबासी प्रभावित हुने गरेका छन् । यसैक्रममा वीरगन्जको माईस्थान चोकमा केही दिनयता सञ्चालनमा रहेको सप्ताहव्या ... बाँकी अंश»
भानेभिरमा लडेर भोटेको मृत्यु
२०७३ पौष २५ सोमबार, जाजरकोट । यहाँको डाँडागाउँ–१ पालीको भानेभिरबाट खसेर एक वृद्धको मंगलबार बिहान ज्यान गएको छ । बिहान बाख्रा चराउन गएको बेला डाँडागाउँ–१ का ६५ वर्षीय वृद्ध भोटे पुनको भिरबाट लडेर ज्यान गएको स्थानीय भवीलाल पुनले जानकारी दिए । भिरबाट करिब दुई सय मिटर तल खसेर उनको मृत्यु भएको हो । रासस ... बाँकी अंश»
बर्दिवास र आसपासमा बाँदरले आतंक मच्चाउँदै
२०७३ पौष १९ मंगलबार, बर्दिवास । महोत्तरी जिल्लाको सुदूरउत्तरवर्तीे बर्दिवास नगरपालिका र आसपासका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा बाँदरको उद्धुम मच्चाइले आजित भएका छन् । घरघरै पसेर सामान उधिन्ने, ससाना नानीलाई झम्टेर टोक्ने र धपाउन खोज्दा जाइलाग्ने बाँदरको उल्याइँले सर्वसाधारण आजित भएका हुन् । बर्दिवास नपाको गौरीडाँडा, पाटु, कालापानी, रजवास, पर्साहीधाप, माइस्थान, टुटेश्वर, गणन्ता, वरडाँडा र चेरुलगायतका बस्ती र छिमेकका हाथीलेट, खयरमारा, बेलगाछी र लक्ष्मीनियाँ गाव ... बाँकी अंश»
नेपाल–चीन सीमावर्ती गाविस टिमुरेमा पशुबध निषेध
२०७३ पौष १७ आइतबार, रसुवा । नेपाल–चीनको सीमावर्ती गाविस टिमुरेमा पशुपक्षीको बध गर्न निषेध गरिएको छ । टिमुरे गाउँका समाजसेवी ठर्केन घलेका अनुसार पहिलो पटक टुल्कु छेकी निमा रिम्पोछे गुरुलामाले गत मङ्सिरको अन्तिम साता सबै चराचर प्राणीको सुखशान्तिको कामना गर्दै पूजापाठ गरेपछि टिमुरे क्षेत्रमा पशुपक्षीको बध गर्ने कार्य अन्त्य गरिएको हो । यस्तै लाङटाङ गाविसमा कुनै पनि पशुपक्षीको बध गर्न नपाइने यहाँको पुस्तौँदेखिको परम्परालाई स्थानीयवासीले निरन्तरता दिँदै ... बाँकी अंश»
नशामा विमान चलाउने पाइलटको जागिर चट
२०७३ पौष १६ शनिबार, जकार्ता (इन्डोनेसिया) । इन्डोनेसियाली एक विमान कम्पनीको विमान उडानका लागि तयारी गरिरहेका बेला विमान चालक नशामा भेटिएको भन्ने आरोपपछि आरोपित विमान चालकलाई उक्त विमान कम्पनीले निष्कासन गरेको छ । विमान चालक टेकाड पुर्नलाई इन्डोनेसियन बजेट एयरलाइनले सुरावयाबाट आन्तरिक उडानमार्फत एयरबस ३२० मा यात्रा गर्न लागेका एक यात्रुको बयानका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । बुधबार विमान उड्नै लाग्दा चालकमाथि नशामा रहेको शङ्का व्यक्त गर्दै विमानबाट ... बाँकी अंश»
सूर्य भगवानसँग जोडिएको छ ‘क्रिसमस पर्व’काे इतिहास
२०७३ पौष ९ शनिबार, काठमाडौं । आईतबार नेपाल तथा विश्वभरका इसाईहरुले आफ्नो महान पर्व क्रिसमस मनाउँदैछन् । २५ डिसेम्बरको दिन मनाईने क्रिसमसको लागि इसाई मुलुकहरुमा १ महिनादेखि नै क्रिस्मस महिनाको रुपमा विशेष कार्यक्रम हुने गरेको छ । तर, यो पर्व २५ डिसेम्बरमा नै किन मनाईन्छ त ? यो विषयमा भने विविध तर्कहरु अगाडि आउने गरेका छन् । भारतको धर्मसंस्कृति सम्बन्धि विषय समेट्ने वेव दुनियाले भने यस विषयमा नयाँ तथ्य फेला परेको जनाएको छ । उसका अनुसार क्रिसमस पर्वको इतिहास हि ... बाँकी अंश»
कुन त राउटेले खेती गरेको त्यसमा पनि बजार नपाउँदा के होला ?
२०७३ पौष ८ शुक्रबार, डडेल्धुरा । केही वर्षपहिले सम्म जङ्गलमा नै बसी जङ्गली कन्दमूल, गिट्ठा भ्याकुर खाएर जीविकोपार्जन गरिरहने राउटे जातिका मानिसलाई नेपाल सरकारले पुनःस्थापना गरेपश्चात् व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ उन्मुख भएका छन् । जङ्गली ओडार छोडेर गाउँघरमा बस्नाका साथै खेतबारीमा अन्न लगाउन पनि उनीहरु अग्रसर बनेका हुन् । राउटे जातिका मानिस जोगबुढाको अमपानीमा व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आएका भए पनि तरकारीले बजार नपाउँदा र लगानी अनुरुपको तरकारीको मू ... बाँकी अंश»